Ma dooneysaa inaad bilowdo ganacsi kuu gaar ah, laakiin dhab ahaantii ma garanaysid halka laga bilaabo?
Tababarkan, waxaan ku arki doonaa sida loo diyaariyo mashruuca abuurkaaga ganacsi tallaabo tallaabo, iyadoo loo marayo fiidiyowyo gaagaaban. Barnaamijka, kiisaska la taaban karo, tusaalooyinka iyo qalabka si aad uga dhigto mashruucaaga ganacsi mid guuleysta.
Xirfadeyda shaqo ee ah maamule mashruuc waxay ii ogolaatay inaan arko shirkado yar yar, kuwa dhexe iyo kuwa waaweynba, si aan ugala hadlo arrimaha ganacsatada, farshaxanleyda, ganacsatada, iyo inaan isku dayo xiisaha abuurista dhowr jeer. shirkadda.
Natiijooyinka… runti ma ahan wax weyn dhowr jeer.
Sababtaas awgeed ayaan u abuuray tababarkan. Qalabkan, hababkan, ururkan, waxaan ku helay iyaga oo qaadanaya 3 talaabo oo horay loo qaaday, 2 talaabooyin sanado ah.
Maanta waxaan kuu soo jeedinayaa inaad iska ilaaliso dhibaatooyinka ku soo wajahan ee uu qofku kula kulmo mashruuc abuur ganacsi, adoo ka bilaabaya lugta midig bilowgeeda
Abuuritaanka ganacsiga: sida ugu habboon ee loogu diyaariyo mashruucaaga Diisambar 12, 2020Tranquillus
horeMashiinka Ganacsiga ee Ganacsi ee Bilowga
socdaAbuur shirkad ganacsi - tabobar bilaash ah